Esikhathini sethu, akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi amanethiwekhi omphakathi athola indima ebalulekile kubantu abaningi. Kukhona ukuthi abaningi bethu "bahlale" cishe sonke isikhathi sabo samahhala, kanye nenye ingxenye yesisebenzi. Kodwa namhlanje ngeke sixoxe ngokuthi lokhu kuhle noma kubi, ngoba asinasithakazelo kulokhu manje.
Ama-Smartphones eminyakeni yamuva ashintshile amafoni avamile, futhi lokhu akumangalisi. Ngempela, empeleni, uma uthenga i-smartphone, uba ngumnikazi wekhompyutha encane engakwazi ukubiza kuphela, kodwa futhi uthathe izithombe, udlale imidlalo, futhi unikeze ukufinyelela ku-inthanethi, kufaka phakathi amanethiwekhi omphakathi. Futhi njengoba amafoni ajwayelekile kakhulu ama-smart amadivayisi agijima ohlelweni lwe-Android, sizobe sicabange izinhlelo zokusebenza nezinhlelo ze-Android.
"VKontakte" iyinhlangano ethandwa kakhulu
Enye yezintandokazi zokuxhumana zomphakathi Runet - "VKontakte." Abasebenzisi bayo bangabantu abanezigaba ezahlukene zeminyaka. Futhi nginezindaba ezinhle kubo. Uma abasebenzisi abanjalo banenhlanhla kubanikazi be-Smartphones abasebenza nesistimu yokusebenza "Android", base benethuba lokuhlala njalo ku-Intanethi "ku-VKontakte", kodwa kulula ukusebenzisa zonke izinsiza zalo mthombo.
Hlangana - uhlelo lokusebenza lwe- "Android" - "Oxhumana naye." Kumelwe kuthiwa masinyane ukuthi lokhu kuyizinto ezithuthukisa kakhulu futhi ezisebenzayo zomkhiqizo. Kwanele ukuyifaka kudivayisi yakho, futhi akudingeki ukuba ungene ngemvume kusayithi le-VKontakte, uhambe ngokugunyazwa okungapheli, ulinde ikhasi ukuthi lilayishe, futhi ubekezelele ezinye iziphazamiso. Lolu hlelo luzokuvumela ukuthi uhlale u-inthanethi, futhi ulondoloze ithrafikhi.
Ake sibheke ukuthi uhlelo lokusebenza lwe- "VC" lwe- "Android" lusinikeza. Abasebenzisi bazokwazi ukubeka amawijethi. Futhi, uzothola ukufinyelela ezindabeni ezivuselelwe zomsakazo, amaqembu nabangani. Uma othile engeziwe kubangani bakho, uhlelo lokusebenza lwe-Android "VKontakte" luzokwazisa ngokushesha ngakho futhi lunikeze ukwamukela lolu hlelo lokusebenza noma lunqabe.
Lolu hlelo alukwazanga futhi umsebenzi obalulekile njengokusebenza ngezithombe. Isicelo "VKontakte" se- "Android" sizokuvumela ukuthi ulayishe izithombe ezintsha, ubuke izithombe zabangani, umake abantu kuzo, udale ama-albhamu wesithombe nokuningi.
Njengesiza, uzothola ithuba lokulalela umsindo wakho ozithandayo we-intanethi. Thola umculo ngomculo oyithandayo, ulalele, bese uyengeza ohlwini lwakho. Futhi-ke, usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe- "Android" "Oxhumana naye", ungahlala ujwayele uhlu lwadlalwayo lwabanye abantu, kuhlanganise nabangani bakho.
Futhi kufanele ukhulume ngezici ezintsha ezinikezwa kubasebenzisi bale software yeselula. Manje asikho isidingo sokuqopha ngokwehlukana oxhumana nabo bakho encwadini yefoni. Uma umuntu unikeze ngolwazi lokuxhumana ngaye ngokwakhe ekhasini lakhe, isicelo se-Android "Oxhumana naye" sikuvumela ukuba uvumelanise nalaba oxhumana nabo ngefoni yakho. Lokhu kwenza ukuphila kube lula.
Ngokuqondene nokuxhumana nabanye abasebenzisi, lapha kulula kakhulu. Ngoba uzotholakala njengemiyalezo yangasese, nezingxoxo zeqembu. I-interface yokudlulisa imiyalezo ilula kakhulu. Ngombono wami, ngisho nangcono kakhulu kunokusebenzisa isiphequluli esivamile.
Kungenzeka ukushicilela odongeni, kanye nasezindongeni zabanye abasebenzisi, amarekhodi ahlukahlukene nezithombe. Ngakho-ke, uma usebenzisa lo mkhiqizo uzokwazi ukufinyelela njalo kuyo yonke imisebenzi yenguqulo yendabuko "yesiphequluli", kuphela ukuphathwa kwabo kuzoba lula kakhulu, ngoba abathuthukisi baye badala le software ngokuzisebenzisa ngokukhululekile ngabanikazi bedivayisi.
Njengamanye izinhlelo zokusebenza nezinhlelo ze-Android, le software ikuvumela ukuba uye ekhasini leqembu lesicelo elisemthethweni, lapho ungahlanganyela khona engxoxweni, futhi ushiye iziphakamiso zakho nokusikisela.
Zizwa ukhululekile ukufaka
Landa uhlelo ku-"Playmarket" ngqo kusuka efonini. Ngendlela, isatshalaliswa ngokuphelele mahhala, okwenza kube ngcono nakakhulu. Kuze kube manje, singasho ngokuphepha ukuthi lolu hlelo lokusebenza lufake amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye wabasebenzisi bamadivayisi asebenza ku-"Android" yesikhulumi. Ngakho-ke uma ungakaze wenze kanjalo, zikhululeke ukufaka isofthiwe kugajethi yakho futhi ngeke ulizisole.
Iyini isibuyekezo se-Windows 7 esiphezulu?